Knowledge Archives - Lodarya
စနေ သားသမီးတွေအတွက်ကတော့ ဒီနှစ် (၂၀၁၉) ခုနှစ်ဟာ ကံအကောင်းဆုံး နှစ်တစ်နှစ် ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အချစ်ရေး ဒီထက်ပိုကောင်းလာအောင် ယတြာ လေးပါ မျှဝေပေးလို“က်ပါတယ်နော် “ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွက် ကံကောင်းစေသော နေ့သားများတွင် စနေသားသမီးများလည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ယခု နှစ်တွင် […]
ကြည့်ကြပ် လုပ်ကြ.. အူးအူးတွေနော်.. အိမ်ကမဟေသီကြီးနဲ့ ပြန်ဆုံနေမယ် “မောင် ဖုန်းကို ပြူးပြဲကြည့်နေတာ ဘာဖြစ်လို့လဲ “ငင် … “ မိန်းမက ရုတ်တရတ်ကြီး လာကြည့်တော့ ကျုပ် မျက်လုံးပြူးသွားတယ် ပြူးဆို ကျုပ်က ကြူနေတာကိုး မိန်းမသိရင် ညစာငတ်မှာ ညစာဆိုတာက စိတ်ဆိုးပြီးထမင်း မချက်တော့မှာကို […]
မြန်မာဆန်ဆန် နေထိုင်ဝတ်ဆင်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူး(၁ဝ) ခု ၁။ သူတစ်ပါးက အထင်သေး အမြင်သေးတာ မခံရခြင်း ၂။ ညစ်ညမ်းသော စကားလုံးဖြင့် နောင်ပြောင်ကျီးစယ်ခြင်းတို့မှ ကင်းဝေးခြင်း ၃။ စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေထိုင်လို့ရခြင်း ၄။ လူအများရဲ့ချီးကျူးလေးစားတာခံရခြင်း ၅။ မိမိဂုဏ်သတင်း ကျော်စောထင်ရှားခြင်း ၆။ မည်သည် […]
7th Sense Creation Production ကနေ ထုတ်လုပ်ရိုက်ကူးတဲ့ “မဟူရာရုပ်ရှင်ရုံ” ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ Offical Trailer က ဒီနေ့မှာ ထွက်ရှိလို့ လာပါပြီ “မဟူရာရုပ်ရှင်ရုံ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ အကယ်ဒမီ နေတိုး၊ အကယ်ဒမီ ကျော်ကျော်ဗို၊ မင်းသွေး၊ နန်းဆုဦးတို့နဲ့အတူတူ အိန္ဒိယနွယ်ဖွား International Model […]
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အလွန်ချစ်သောစုံတွဲများ ပိုမိုဝဖြိုးလာကြောင်း သိပပညာရှင်များ လေ့လာတွေ့ရှိ…!
လေ့လာချက်များစွာအရ ပျော်ရွင်သော ဆက်ဆံရေး၊အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသော စုံတွဲများအနေနဲ့ ပိုမိုဝိတ်တက်ကြောင်းသိရပြီး ထိုအတွက် သက်သေပြချက်များလဲ ရှိပါတယ်။ -အမေရိကန်နိုင်ငံ North Carolina တက္ကသိုလ်ရဲ့ သုတေသနအဖွဲ့က စုံတွဲပေါင်း၈၀၀၀ကျော်ကို ကိုယ်အလေးချိန်တိုင်းပြီး လေ့လာရာမှာ လက်ထပ်ပြီးအမျိူးသမီးတစ်ယောက်သည် လက်ထပ်ပြီး ၅နှစ်ကနေ၆နှစ်အတွင်း ၂၄ပေါင်အထိ ၀ိတ်တက်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင် လက်မထပ်သေးပေမယ့် ချစ်သူနဲ့အတူနေသောအမျိူးသမီးများဟာ […]
အမျိုး သမီးတွေ အတွက် ကင်ဆာထိ တောင်ပျောက် ကင်းပြီး ဆီးချို ၊ သွေးတိုး၊ မီးယပ်ရောဂါနဲ့ လေးဖက် နာတွေအတွက် အစွမ်း ထက် လက်ပံပွင့်…!
( က ) ဆီချိုးရောဂါသမားအတွက် လက်ပံပွင့်ကိုပြုတ်စားပါ။ လက်ပံပွင့်ကိုဟင်းချိုချက်စားပါ။ ဆီချိုရောဂါသမားအတွက်ဆေးကောင်းတစ်လက် ( ခ ) သွေးတိုးရောဂါသမားအတွက် ဇီးသီးနဲ့လက်ပံပွင့်ရောပြီးဟင်းချိုချက်စားပါ။ သွေးတိုးရောဂါပျောက်ကင်းစေသောဆေးတစ်လက် ( ဂ ) မီးယပ်ရောဂါသမားအတွက် လက်ပံအခေါက်ပြုတ်ပြီးသောက်ပါ။ သွေးဆုံးမီယမ်အမျိုးသမီးဆေးကောင်းတစ်လက် ( ဃ ) လေးဖက်နာသမားအတွက် လက်ပံပင်အမြစ်ကိုသွေးပြီးသောက်ပါ။ပြီးလျှင်ခြေဆစ် လက်ဆစ်ကိုလိမ်းပေပါ။ […]